Sacuudi Carabiya - ALinks
Maqaallada ku saabsan Sacuudiga
Visa Dalxiiska Saudi Arabia
September 14, 2020 Shubham Sharma Saudi Arabia, fiisada
Sacuudi Carabiya waxay kamid tahay wadamada carabta. Taas waxaa sidoo kale loo yaqaan Dunida Carabta. Kuwani waa waddamada leh luqadda rasmiga ah ee Carabiga. Sacuudi Carabiya waa meel kufiican booqashada aduunka. Sidaas,
Ma dooneysaa inaad Shaqo hesho ama ka shaqeyso Sacuudiga? Ogow halkaan!
April 30, 2020 Karuna Chandna shaqo, Saudi Arabia
Ardayda UK oo shaqo ka raadsanaya gudaha Saudi Arabia. Sababtoo ah waxaad ka heli kartaa Shaqooyinka halkan warshadaha batroolka. Sidoo kale shaqooyinka meelaha waxbarashada sida, barida, iyo IT. Ahmiyada sii kordheysa ayaa ah sidii loo balaarin lahaa dhaqaalaha. Iyo yareynta
Tilmaanta Miisaaniyadda ee Safarka loogu tagayo Sacuudi Carabiya
February 4, 2020 Shubham Sharma Saudi Arabia, safarka
Sacuudi Carabiya waxaa si rasmi ah loogu yaqaanaa Boqortooyada Sacuudi Carabiya waa wadan ku yaal Bariga Dhexe. Sacuudi Carabiya waxay si weyn uga qaybqaadataa wax soo saarka saliidda adduunka. Ilaa 2013, habka kaliya ee lagu booqan karo Saudi Arabia waa fiisaha Ganacsiga oo kaliya
Gaadiidka Ugu Fiican ee Sucuudiga
February 2, 2020 Shubham Sharma soo qaado, Saudi Arabia, safarka
Waxaa jira waqti markii gaadiidka Sacuudi Carabiya uu ka maqnaa ku dhowaad qayb kasta. Boqortooyada Sacuudi Carabiya waxay la kulantay dhibaatooyin badan oo xagga gaadiidka ah. Horraantii 1900, Sucuudigu ma lahan ilo gaadiid oo wanaagsan oo waddooyinka ka baxsan. Laakiin ka dib
Bangiyada ugu sareeya Boqortooyada Sacuudi Carabiya
February 1, 2020 Shubham Sharma lacag, Saudi Arabia
Boqortooyada Sacuudi Carabiya waxay leedahay 24 bangi oo shati leh oo 12 ka bangi ay maxalli yihiin halka inta kalena ay yihiin laamaha bangiyada shisheeye. Dhamaan bangiyada ku yaal Sacuudiga waxaa gacanta ku haya Bisha Cas ee Boqortooyada Sacuudi Carabiya
Jaamacadaha Caalamka Ugu Fiican Boqortooyada Sacuudi Carabiya.
January 31, 2020 Shubham Sharma Saudi Arabia, waxbarasho
Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa kamid ah dowladaha sida dhaqsaha ugu kobaca dhanka aqoonta tayada leh ee Bariga Dhexe. Sacuudi Carabiya hadda waxay leedahay dhowr xarumood oo heer caalami ah. Qaranka wuxuu bixiyaa waxbarasho heer caalami ah ku dhawaad ​​dhammaan durdurrada waxbarashada. Sacuudiga
January 30, 2020 Karuna Chandna Saudi Arabia, safarka
Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa xarun u ah Masaajidda maadaama inta badan muwaadiniinta wadankaasi ay yihiin muslimiin. Ka sokow taasi, waxaa jira meelo kale oo badan oo lagu booqdo boqortooyada. Waxaa jira waqti aysan jirin wax calaamad ah
Hoteellada ugu Caansan ee Boqortooyada Sacuudiga
January 23, 2020 Karuna Chandna hotels, Saudi Arabia, safarka
Boqortooyada Sacuudi Carabiya waa waddan ballaadhan, kama haysato wax yaraanta hudheelo raaxo leh. Hoteelada ku yaal Sacuudi Carabiya waxaa si aad ah loogu dhiirrigeliyay naqshadeynta casriga casriga ah ee taabanaya hiddaheeda. Jeddah iyo